Iyo beta KDE Plasma 5.17 yave kuwanikwa, ziva nhau dzayo | Linux Vakapindwa muropa
Ya KDE Plasma 5.17 beta vhezheni yakaburitswa kune veruzhinji nevashandisi vane shungu vanozokwanisa kuita bvunzo dzakakodzera uye nekugona kutsigira mukuona kwekukanganisa. Iyi nyowani beta yeKDE Plasma 5.17 inounza kuvandudzwa kwakasiyana pakati payo shanduko yezvinhu zvakasiyana siyana inomira yenzvimbo, pamwe nekuvandudza kune izvi uye kunyanya mhinduro yemakanganiso.
Imwe yeshanduko dzinonyanya kuzivikanwa iri muKWin hwindo maneja iyo ine inovandudzwa rutsigiro rwepikisheni yakakura yekuratidzira (HiDPI) uye yawedzera chidimbu chekuwedzera rutsigiro rweWayland-based Plasma desktop sessions.
Ichi chimiro inokutendera iwe kusarudza iwo akakwana saizi yezvinhu pazvikwiriso nehupamhi hwepikiseli, semuenzaniso, unogona kuwedzera zvakaratidzwa zvezvinhu kwete kaviri, asi ka2.
Iyo Breeze GTK theme yakagadziridzwa kusimudzira kuratidzwa kweiyo Chromium Chrome interface mune iyo KDE nharaunda (semuenzaniso, anoshanda uye asingashande tebhu ikozvino zvave kuratidzika zvakasiyana). Iyo color scheme inoshanda kuGTK uye GNOME kunyorera. Uchishandisa Wayland, zvakave zvinogoneka kuchinjisa iyo GTK yemusoro mapaneru zvine chekuita neye windows windows.
Iyo interface yakagadziridzwa kugadzirisa mwenje wehusiku, iyo yave kuwanikwa kana uchishanda paX11.
Kururamisa kupururudza neguru rembeva zvakare kunowanikwa muKWin mune Wayland-based nharaunda.
Nguva yeX11, iko kugona kushandisa Meta kiyi seyakagadzirisa switch windows kwawedzerwa (panzvimbo yeAlt + Tab), pamwe nesarudzo inorambidza kushandiswa kwezviratidziro kungori kwenzvimbo yazvino yekuratidzira mune yakawanda-yekutarisa setups.
Mu "Present Windows" mhedzisiro, rutsigiro rwekuvhara windows nekapakati mbeva kubaya kwawedzerwa.
Imwe shanduko yeiyi beta yePlasma 5.17 ndeyekuti iwo maratidziro emakona echidzitiro akagadziridzwa, kushandiswa kwesimba, saver yekrini, skrini mhedzisiro, yekuvhara skrini, ekugunzva skrini, windows, epamberi SDDM marongero, uye zviito zvekukonzeresa kana uchikwira pamusoro pemakona eiyo skrini.
Zvirongwa zvekuiswa kweiyo peji peji (SDDM) zvinowedzerwa, iyo iwe yaunogona kudoma yako wega font, color scheme, icon set, uye mamwe marongero.
Iyo mbiri-nhanho yekurara modhi yakawedzerwa, mairi iyo sisitimu inotanga kupinda munzira yekumira uye mushure memaawa mashoma mune yekurara maitiro.
Kana iri Discover se Ivo vaisa zviratidzi zviratidziro zvekufambira mberi kwekuita. Yakagadziriswa kutaurwa kwezvikanganiso nekuda kwenetiweki yekubatanidza nyaya.
Muchikamu chekumisikidza sisitimu, iyo yekutanga ruzivo nezve iyo system inoratidzwa
Kune vanhu vakaremara, akawedzera kugona kufambisa iyo cursor uchishandisa keyboard
Wakawedzera kugona kushandura kimuvara yemisoro yemusoro pane peji reruzhinji
Wakawedzera kugona kupa hotkey yepasi rese kudzima iyo skrini.
Wakawedzera maikoni mubato rezasi uye maacons eapapo maapp.
Mune zvinyorwa zvinonamira, nekumisikidza, zvinyorwa zvekumisikidza zvinyorwa zvinojekeswa kana uchinamira kubva kubhodhibhodhi
MuKickoff, muchikamu chemagwaro achangobva kuvhurwa, kuongororwa kwemagwaro akavhurwa muGnome / GTK kunyorera kunopihwa zvakare
Wakawedzera chikamu chekugadzirisa zvishandiso neThunderbolt interface kune iyo configurator
Pakupedzisira kune avo vanofarira kuyedza iyi beta vhezheni ivo vanogona kuyedza iyo nyowani vhezheni kuburikidza neRarama kuvaka kubva kuvhuraSUSE chirongwa uye inovaka kubva kune yekugadzirisa chirongwa KDE Neon Kuedza.
Mapakeji ekuparadzirwa kwakasiyana inogona kuwanikwa pane ino peji. Kuvhurwa uku kunotarisirwa muna Gumiguru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Iyo beta KDE Plasma 5.17 yave kuwanikwa, ziva nhau dzayo
Parrot OS yakagadziridzwa uye yayo nyowani vhezheni Parrot 4.7 inosvika